Yobhi 15 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
15 Waza uElifazi umTeman waphendula wathi: 2 “Ngaba umntu olumkileyo uya kuphendula ngolwazi olunomoya,+Okanye ngaba uya kusizalisa isisu sakhe ngomoya wasempuma?+ 3 Ukohlwaya ngelizwi nje kuphela akuyi kunceda,Yaye amazwi kuphela awayi kuba yingenelo ewodwa. 4 Noko ke, wena wenza ukoyika phambi koThixo kungabi namandla,Yaye uyakunciphisa ukuba nayo nayiphi na inkxalabo phambi koThixo. 5 Kuba isiphoso sakho siso esiqeqesha umlomo wakho,Yaye ukhetha ulwimi lwabantu abanobuqili. 6 Ngumlomo wakho okuvakalisa ungendawo, asindim;Yaye yimilebe yakho ekuphendulayo.+ 7 Ngaba wawungumntu wokuqala ngqa ukuzalwa,+Okanye ngaba waveliswa ngenimba ngaphambi kweenduli?+ 8 Ngaba uyaliphulaphula igqugula likaThixo,+Yaye ngaba ubulumko ubuphelelisela kuwe? 9 Eneneni yintoni oyaziyo esingayaziyo?+Yintoni oyiqondayo engekhoyo nakuthi? 10 Kokubini iingwevu nabalupheleyo bakuthi,+Lowo umdala kunoyihlo ngeentsuku. 11 Ngaba ukuthuthuzelwa nguThixo akukwanelanga,Okanye ilizwi elithethwe ngothantamiso kuwe? 12 Kutheni intliziyo yakho ikuthabathekisa,Yaye kutheni amehlo akho ebengezela? 13 Kuba umoya wakho uyawujika ube nxamnye noThixo,Yaye ukhuphe amazwi emlonyeni wakho. 14 Uyintoni na umntu ofayo ukuba angahlambuluka,+Okanye nabani na ozelwe ngumfazi ukuba angaba ngolungileyo? 15 Khangela! Akakholwa ngabangcwele bakhe,+Namazulu eneneni akacocekanga emehlweni akhe.+ 16 Kubeke phi na ke xa ubani ecekiseka yaye onakele,+Indoda esela intswela-bulungisa njengamanzi! 17 Ndiya kukuvakalisa oko kuwe. Ndiphulaphule!+Kwanoku ndikubonile, ngoko ndivumele ndikubalise, 18 Oko abazizilumko+ bakuxelayoBaza abakufihla, kuvela kooyise. 19 Ngabo kuphela abanikwa ilizwe,Yaye akukho mntu wasemzini wadlula phakathi kwabo. 20 Ngayo yonke imihla yakhe lowo ungendawo uyathuthunjelwa,Kwanenani leminyaka ebekelwe uzwilakhe. 21 Endlebeni yakhe kukho isandi sezinto ezinkwantyisayo;Ebudeni boxolo ufikelwa ngumphangi.+ 22 Akakholelwa ukuba uya kubuya ebumnyameni,+Yaye ubekelwe ikrele. 23 Uyabhadula efuna isonka—siphi na?+Uyazi ukuba imini yobumnyama+ sele ilungile esandleni sakhe. 24 Ukubandezeleka nokungcungcutheka kuqhubeka kumnkwantyisa;+Kuyamongamela njengokumkani elungele ukuhlasela. 25 Ngenxa yokuba wolula isandla sakhe nxamnye noThixo,Yaye uzama ukuzibonakalisa ongamile kunoSomandla;+ 26 Ngenxa yokuba umhlangabeza ngobuntamo-lukhuni,Ngezihombiso ezingqindilili zamakhaka akhe; 27 Ngenxa yokuba ubuso bakhe ubugubungela ngokutyeba kwakheYaye ubeka amanqatha esinqeni sakhe,+ 28 Uhlala ezixekweni eziza kutshayelwa;Ezindlwini abantu abangayi kuqhubeka behlala kuzo,Ngokuqinisekileyo ezingqineka zimiselwe iimfumba zamatye. 29 Akayi kuba sisityebi yaye nendyebo yakhe ayiyi kwanda,Yaye inzuzo yazo akayi kuyinabisa phezu komhlaba.+ 30 Akayi kusuka ebumnyameni;Isetyana lakhe liya komiswa lidangatye,Yaye uya kuphambuka ngokufutha komlomo Wakhe.+ 31 Makangakholwa yinto engento, elahlekiswa,Kuba uya kungqineka efumana into engento; 32 Iya kuzaliseka ngaphambi komhla wakhe.Yaye ngokuqinisekileyo ihlumelo lakhe aliyi kukhula libe luhlaza.+ 33 Iidiliya zakhe ezikrwada uya kuziwisa njengomdiliya,Aze iintyatyambo zakhe aziwise njengomthi womnquma. 34 Kuba indibano yabawexuki ludlolo,+Yaye umlilo umele udle ugqibe iintente zokunyoba.+ 35 Kukho ukukhawula inkathazo nokuzala into eyenzakalisayo,+Yaye isisu sabo silungisa inkohliso.”